Mifanila trano amin'ny rahalahiny izay manao bar/karaoke ao Mahazoarivo izy. Tokony ho tamin'ny 10 ora alina dia nisy tovolahy maromaro, mamo ary nanakorontana tao amin'ny “bar” an'ity rahalahiny ity. Nifampitarika taty ivelan'ny “bar” ireto andiana tovolahy niady ary tonga hatreo am-baravaran'ity zandary. Noho ny fiarovana ny ain'ity rahalahiny sy amin'ny maha mpitandro filaminana azy dia voatery niditra an-tsehatra nandrava ny ady izy, kinanjo izy indray no nanamparan'ireo zatovo novonoina. Vely tavoahangy sy daroka no nahazo azy ka nahavaky ny handriny sy ny fihirifany. Nantsoina ny polisy manao fisafoana amin'ny alina ka mbola tao anatin'ny ady no nisamborana ireo zatovo. Nentina haingana teny amin'ny hopitaly ilay zandary saingy tsy tana ny ainy noho ny maraina ny andro. Namela mpitondra tena sy kamboty mianadahy Ratompokolahy. Enina no efa voasambotra hatreto ary heverina ho mbola nisy namany hafa nahavanona ny loza. Eo am-panaovana fanadihadiana ny zandary Andranomadio izay miara-misalahy amin'ny rantsamangaikan'ny Sampam-pikarohana ny heloka bevava (GAPJ) eto Vakinankaratra. Ny Zandarimaria dia tsy handefitra amin'ny fandatsahana aina ny olony indrindra fa eo am-panaovana ny adidiny satria na tsy manao fanamiana aza izy ireo dia zandary hatrany, hoy ny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena.